Ushaywe washona osolwa ngokubamba inkunzi | News24
OWESILISA waKwaDambuza ushaywe wabulawa umphakathi ngoLwebili mhlaka-8 kuNhlaba (May) ngemuva kokusolakala ukuthi uphuce owesifazane umakhalekhukhwini endaweni yaseMbali Unit 3.
UMnuz Sphamandla Ngcobo (26) ushonele endaweni yesigameko ngemuva kokushaywa kanzima ekhanda ngamatshe nezinsimbi.
UMnuz Ngcobo ushaywe kwaqeda kwashiywa isidumbu sakhe sidindilizile sinqunu khona kulendawo.
Ngokuthola kwe- Echo ngomthombo wayo ohlala kule ndawo uMnuz Ngcobo ubefunwa phansi phezulu kusukela ekuseni ngosuku lwesigameko ngemuva kokuphutshuka kwezindaba zokuthi ubambe owesifazane waseMaqeleni inkunzi wamuphuca umakhalekhukhwini ekuseni ngoLwesibili.
“Umphakathi ubulokhu umfuna wabaleka wacasha ngaphansi kwetafula komunye umuzi khona eMbali Unit 3. Umnikazi womuzi uthe mayengena endlini ebona umufi wabe esememeza ethuswa yilomuntu osendlini. Yilapho-ke umphakathi umthole khona wabe usumthatha uyomshayela ngasemgwaqeni omkhulu wakuyo le ndawo,” kubeka wona.
Ngesikhathi i-Echo ifika endaweni yesigameko ifice isidumbu sikaMnuz Ngcobo sisadindilizile eduze komgwaqo simbozwe ngendwangu yetafula.
Amalungu omphakathi okusolwa ukuthi yiwona amushayile abengasabonwa nangokhalo kodwa bese kukhona malungu omndeni nama phoyisa.
UNks Winnie Ngcobo ongu-anti naMnuz Ngcobo utshele i-Echo ukuthi ubesekhaya ngesikhathi ebikelwa ngalesi sigameko. Uthe bewumndeni baphathe kabi kakhulu ngalesi sigameko futhi bafisa ukuthola izimpendulo zokuthi kungani indodana yabo ibulewe.
“Ngibizwe umfowabo kamufi ethi angizobona uSpha sebemshayile akazi noma ushonile noma uqulekile yini. Ngishiye yonke into ngaphuthuma endaweni yesigameko kodwa ngafika eseseshonile. Ubehlupha yena impela siyamazi kodwa besingekho isidingo sokuthi abulawe ngalesi sihluku abulawe ngaso. Ngeke size simphikele ngezenzo zakhe ezimbi ngoba besihleli sibikelwa njalo ngemikhuba yakhe.
Okusixakayo ngayo yonke lento nokusiphatha kabi ukuthi kuthiwa ubambe inkunzi owesifazane umakhalekhukhwini kodwa lowo makhalekhukhwini awuzange utholakale kuyena uma eseshayiwe. Ngisho izimpahla zakhe bezingekho asizazi ukuthi zishonephi njengoba simthole esenqunu nje. Siyafisa ukuyithola lentombazane ekuthiwa ibanjwe inkunzi ukuze izosichazela kahle ukuthi kusukephi kuze kufike ekutheni aze abulawe. Mhlawumbe lokho kuzosisiza ukuze sithobeke amanxeba,” kubeka yena
Uqhube wathi bekungaba ngcono ukube indodana yabo ayibulawanga kodwa inikelwe emaphoyiseni.
“Akekho umuntu ongathanda ukubona ingane yakhe ibulawa ngalolu hlobo ekubulawe ngalo uSpha. Siyafisa ukuthi sithole izimpendulo nomthetho futhi udlale indima yawo. “
Okhulumela amaphoyisa esiteshini i-Plessislaer uKapteni Musa Ntombela usiqinisekisile isigameko wathi amaphoyisa aphenya icala lokubulala.
“Akukho muntu oseboshiwe ngalesi sigameko kulandela ukushaywa kubulawe owesilisa eMbali Unit 3 nokusolwa ukuthi ushaywe umphakathi.
“Utholwe elimele kanzima ekhanda futhi nezingalo zakhe zombili bezephukile,” kubeka uKapteni Ntombela.
Ngibizwe umfowabo kamufi ethi angizobona uSpha sebemshayile akazi noma ushonile noma uqulekile. Ngishiye yonke into ngaphuthuma endaweni yesigameko ngafika eseseshonile. Ubehlupha yena impela siyamazi kodwa besingekho isidingo sokuthi abulawe ngalesi sihluku abulawe ngaso. Ngeke size simphikele ngezenzo zakhe ezimbi ngoba besihleli sibikelwa njalo ngemikhuba yakhe.